हेर्नुहोस आजको राशिफल : मंगलबार कुन राशि भएकाहरुले के गर्ने, के नगर्ने ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : मंगलबार कुन राशि भएकाहरुले के गर्ने, के नगर्ने ?
Khabar house | २ मंसिर २०७७, मंगलवार ०१:३५ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : वि.सं.२०७७ साल मंसिर ०२ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर १७ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । कार्तिक शुक्ल पक्ष । तिथि–द्वितीया, ०१ घडी ४१ पला,बिहान ०७ बजेर ०८ मिनेट उप्रान्त तृतीया । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर २७ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०८ मिनेट । दिनमान २६ घडी ४४ पला । अन्राष्ट्रिय बिद्यार्थी दिवस ।
मेष : समय तथा परिस्थितीको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि कामको थालनी गर्नुहोला कामहरु बिग्रने अधिक सम्भावना रहेकोछ । आफन्त तथा आफूले मन पराएको मानिससँग दुरी बढ्ने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय लगानी गरेपनि आम्दानी थोरै हुँदा आर्थिक व्यावस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । अध्ययनमा मन नजादा गुरुवर्ग तथा आफन्तको गाली खाईनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।
बृष : पति प’त्नीका साथ रमाईलो व्यावसायीक यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ । सवारी साधन तथा भौतिक सम्पती जोड्ने योग रहेको छ । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा अगाडी तपार्ईँको नाम आउदा मन प्रशन्न रहने छ । माया प्रे’मको गाठो मजबुत भएर जानेछ भने दा’म्पत्य जीवनमा थप खुसीयाली छाउँनेछ। आफन्तका साथ मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आम्दानी बढ्ने हुनाले वि’लासी जीवन यापन गर्न सकिनेछ। साझपख समय मध्ययम रहेकोले आफन्तसँग मन मु’टाव सिर्जना हुनेछ
मिथुन : न्यालयबाट हुने व्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा फैसला हुनाले खुसीले उचाई नाघ्नेछ । पढाइ लेखाइमा नसोचेको सफलता हात लाग्नेछ । व्यापारमा बृद्धि हुनेछ भने थप ठाउमा लगानी गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावली पक्षबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा आट तथा प’राक्रम बढेर जानेछ । पुराना स’मस्याहरु सल्टाउन सकिने तथा नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जाने तथा उपाहार प्राप्तीको गतिलो योग रहेको छ ।
कर्कट : अध्ययनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछी परिने चिन्ताले सताउनेछ । आफन्त तथा घर परिवारका सदस्यहरुको पनि सहयोग तथा समर्थन नहुँदा एक्लोपनको महशुष हुनेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला पेट सम्वन्धी समस्या आउन सक्छ । भौतिक साधन तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा बिचार पुर्याउनुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । साभपख समय राम्रो रहेकोले आफन्त तथा मामा मावली पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
सिंह : बिभिन्न अवसर आएपनि ति अवसरको सहि तरिकाले सदुपयोग गर्न नसक्दा समयले तपार्ईँलाई पछाडी छोड्ने छ । व्यापार व्यावसायमा आम्दानी कम हुनेछ भने खर्च बढ्नाले आर्थिक व्यावस्थापन गर्न कठिनाई हुने छ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरुले जनताको आ’लोचनात्मक समर्थन पाउने योग रहेकोछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ । आफन्तसँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ ।
कन्या : शाहशिलो काम गर्ने जोसजागर आउनेछ भने खेलकुद तथा यस्तै गतिविधिमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउने छ । पढाइ लेखाइमा परिणाम मुखी उपलव्धी हासिल गर्न सकिनेछ भने छोटो दुरिको शैक्षिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ । दाजुभाई तथा आफन्तसँग मिलेर गरिने जुनसुकै व्यावसाय फ’स्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न होईने छ। माया प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति प’त्नी विच मा’याको गाठो कसिलो भएर जानेछ । साझपख भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
तुला : पढाइ लेखाइमा खासै ध्यान नजादा बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछी परिनेछ । कुटुम्बसँग मन मु’टाव बढ्ने हुँदा आजको दिन टाढा नै रहनु राम्रो रहेको छ । बोल्दा वा निर्णय गर्दा ध्यान दिनुहोला आ’त्मघाती पनि हुन सक्छ । खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्यमा स’मस्या आउनेछ । माया प्रे’ममा अविश्वास बढ्नेछ भने पति प’त्नी विच विश्वासको वातावरण गुम्ने खतरा रहेको छ । साझपख छोटो दुरिका फ’लदायी यात्राको योग रहेकोछ ।
बृश्चिक : पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिने छ । व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जाने हुनाले आर्थिक व्याबस्थापन सुदृड हुनेछ। माया प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवार तथा आफन्त बीचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । सुन्दर तथा वि’लासी बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । साझपख खानपानमा ध्यान दिनुहोला ।
धनु : स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । लामो दुरिको विदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेकोछ भने विदेशसमा बसेर समय खर्चिनेहरुले प्रशस्त रुपैयापैसा कमाउँन सक्नेछन् । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले अन्य दिनभन्दा सुधार भएर जानेछ । माया प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागि भने समय मध्ययम रहेकोछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले सामाजिक काम गरि नाम कमाउन सकिनेछ ।
मकर : आफन्तजन तथा दाजुभाईबाट प्रशस्त सहयोग पाईनेछ। माया प्रे’ममा सामिप्यता बडेर जानेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । तरलपदार्थ जस्तै हाईड्रो,पानि जस्ता उद्योग व्यावसायमा लगानी गर्दा उचित प्रतिफल पाइने छ । सवारि साधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ । बिद्यामा तपार्ईँले गरेको मिहिनेत खेर जानेछैन । साझपख यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
कुम्भ : गीत संगित क्षेत्रमा रुची बढ्ने हुदा केही समय रमाईलो तिर पनि समय खर्च हुनेछ। समयको गती सँगै अगाडि बढ्न सकिने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सकिनेछ । आज गरीएको लगानी फस्टाएर जाने हुनाले व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । नयाँ काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने समयले रोजगार दिलाउने तथा कामका बढुवा हुने योग रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । माता पिताको सहयोगले राम्रा कामगरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ।
मीन : समुदायको हक हितको निम्ती कामगर्ने अवसर आएपनि असजिला परिस्थिती हरुको सामना गर्नुपर्नेछ। पढाइ लेखाइमा ध्यान नजादा सफलता हात पार्न मुस्किल रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरेपनि भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा मन दुखी हुनेछ । माया प्रे’ममा अविश्वास बढ्नेछ भने जीवन साथीसँग सामान्य मन मु’टाव सिर्जना हुनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा बृद्धि हुनेछ ।
तपाईको दिन शुभ रहोस् । यूवा ज्योतिषि डिपि भण्डारी, ज्योतिष परामर्ष सेवा केन्द्र चाबहिल, काठमाडौं फोन न.९८०८३०७२७५ नोट: चिना तथा टिप्पन वनाउँन,चिना हेराउँन तथा वास्तुसँग सम्बन्धित जानकारिको लागि अवस्य सम्झनुहोला ।
हेर्नुहोस् आजको राशिफल : वि.सं. २०७७ साल फागुन २४ गते। सोमबार ।
आजको राशिफल : आईतबार कस्तो रहनेछ तपाईंको भा’ग्य ?
हेर्नुहोस आजको राशिफल : शनिबार कुन-कुन राशिका लागि छ शु’भ ?
हेर्नुहोस आजको राशिफल : बुधबार कुन भा’ग्य कस्तो रहने छ ?